I-Alterian SDL | I-SM2 yisixazululo sezinkundla zokuxhumana esihlinzeka izinkampani ngokubonakala phambi kwazo endaweni yezenhlalo futhi iveze ukuthi izingxoxo ezifanele zenzeka kuphi, ngubani obambe iqhaza, nokuthi amakhasimende acabangani ngazo.
Umsunguli uMark Lancaster uchaza ukuthi kungani i-SDL ibalulekile emizamweni yenkampani yakho yokuthengisa online:
Leli thuluzi liqukethe konke ukusebenza kokugaya amathuluzi amaningi ekunikezweni kokumaketha kwezokuxhumana, kepha kuhamba lelo mile elengeziwe ukuletha ubunzima bokuthola ukusebenza okufana nokuhlaziywa kwemizwa, ivolumu yansuku zonke, umthelela omkhulu nokuningi. Ngenkathi amathuluzi amaningi egxila endaweni ye-niche geographical, i-Alterian SM2 isekhaya ngokuphelele endaweni yomhlaba wonke, ivumela ukuqoqwa kwedatha ngemodi yezilimi eziningi, ukuhumusha, kufaka imibiko ngemizwa, inani labantu, amanethiwekhi ezokuxhumana nabantu nokuningi. Ukwazi ukuthi ukuphathwa komphakathi okwenziwe kwasendaweni, nokuqukethwe kwasendaweni, okufanelekile kubalulekile ekuzibandakanyeni okusebenzayo, lokhu kuyimfuno ebaluleke kakhulu ezinkampanini ezinobukhona bomhlaba wonke.
Izici ezibalulekile nokusebenza kwe-SDL | SM2:
Ivolumu yansuku zonke - Linganisa ubukhulu bezingxoxo zemikhiqizo ethile ngokumbozwa, chaza izinkathi zesikhathi kufaka umlando womlando bese ubhoboza ukufakwa kokuthunyelwe okuthile noma ukuphawula.
Yabelana Ngezwi - Funda ukuthi yimiphi imithombo eba nomthelela omkhulu engxoxweni, buyekeza uhlobo lohlobo lokuqukethwe kuziteshi eziningi bese uqhathanisa isabelo sengxoxo kumikhiqizo eminingi ukuqonda ukuthi yini eqhuba ingxoxo.
Qhathanisa Izinsuku - Hlaziya izingxoxo zomkhiqizo nezimbangi, landelela ukuthi izihloko zihamba kanjani ngokuhamba kwesikhathi ngokuqhathanisa, buka ukuqhathanisa ngakunye, ulinganise iminikelo yokuncintisana kanye nebhentshimakhi emelene namazinga embonini.
Iculo ishosha esihlatshelelwayo - Thola izingqinamba okuxoxwa ngazo ngomkhiqizo wakho, izimbangi noma imboni, qonda intshisekelo yezithameli ezihlukile, uqinisekise ukuthi amagama asemqoka asetshenziswa ngokunembile ekusethweni kosesho.
Izibalo zabantu - Thola amasayithi anethonya, amabhulogi nabantu, ingxenye ngokuthandwa, ubulili nobudala bombhali.
Umbhali Amathegi - Qhathanisa amagama angukhiye ethegi phakathi komkhiqizo wakho kanye nabancintisana nabo, qonda izingqikithi ezivamile nobukhulu bengxoxo, futhi ubone amagama angukhiye we-niche we-SEO.
Imbondela Yemephu - Qonda ubukhulu bengxoxo ezifundeni ezahlukahlukene, behlukanisa izindawo ezingokomzimba zezingxoxo ezahlukahlukene bese ubhoboza phansi ukuze uhumushe uhlobo lwengxoxo.
Buka Imibiko - Ukubika kokuqwashisa ngokuchofoza okukodwa kuqinisekisa ukuthi ngeke uphuthelwe okuthunyelwe okubalulekile noma i-athikili, thola ukufinyelela kuma-verbatim afanele ngesikhathi sangempela kanye nokukwazi ukuhlala unolwazi ngezihloko ezishisayo bese usabela ngokushesha.
Imibiko Yenhliziyo - Ukubona uphawu lomkhiqizo wamakhasimende noma imizwa ekukhangiseni, qonda ukusatshalaliswa kwemizwa yomkhiqizo esikhathini esithile futhi wenze ngokwezifiso imizwa ethile ethize embonini noma kumkhiqizo.
Kafushane, I-Alterian SM2 inikezela ngolwazi oludingekayo ukusiza ukukhomba izithameli zakho ezihlosiwe, imiphakathi efanele, abanikeli bosizi emakethe yakho oqonde kuyo, nemephu yomzila yezindlela ezahlukahlukene zokuzibandakanya nabo. Inikeza impendulo ebalulekile nokuqonda mayelana nezitayela zakamuva nentuthuko ehambelana nomkhiqizo wakho, kanye nemininingwane eminingi eyisisekelo edingekayo ukuhlela imikhankaso yemithombo yezokuxhumana ephumelelayo njengengxenye yecebo lokukhangisa jikelele.
Tags: mduduzii-alterian sdli-alterian sm2sdlsm2social mediaukuhlakanipha kwezokuxhumana nabantuplatform platform media
Lapho uthenga Abathandi be-Facebook inani lezivakashi ekhasini lakho ngendlela efanele njengoba isayithi lakho lizokwanda, likwenza ukwazi ukusebenzisa kakhulu izingosi zokuxhumana zomphakathi ngenzuzo ekhulayo. Inani elikhulayo labantu njengamanje lisebenzisa izingosi zokuxhumana zomphakathi ekuthengeni ukuxhumana nabangane nemindeni yabo. Ngenani elingenamkhawulo lamakhasimende avula inethiwekhi usuku ngalunye unamathuba angenamkhawulo wokuletha inkampani yakho, izinsiza kanye nezimpahla kumakhasimende abazoba khona emhlabeni wonke.Thenga abalandeli be-facebook kwa-yoursocialfans ..
Jul 23, 2012 ku-9: 45 AM
Sisebenzisa i-SDL Alterian SM2 kumakhasimende ethu cishe iminyaka engu-2. Kuyinto ithuluzi elihle kakhulu leSocial Media Analysis futhi amakhasimende ethu aqonda inani leSM2 elingcono kakhulu kunanoma iyiphi enye ingxenyekazi eyaziwayo futhi elisebenza ngezilimi eziningi. Thanda leli thuluzi!